Shirkada CORBITION waxaa la gudoonsiiyay cinwaanka shirkada canshuurta bixisa ee Shanghai. Tani waa xaqiijinta tiknoolajiyada 'CORBITION', laakiin sidoo kale soo celinta dhammaan shaqaalaha CORBITION bulshada. 8-dii ee la soo dhaafay Shiinaha (Shanghai) International Technology Import and Export Fair, badeecadaheena waxaa lagu aqoonsaday tayada ruuxiga Shiinaha iyo farsamada wareysiga iyo warbixinnada. Bandhigan, CORBITION wuxuu ku muujiyay 36-bit iyo 48-bit waxsoosaarayaal nukliyeer ah, iyo sidoo kale taxane ah alaabooyin caafimaad oo la isticmaalo sida tiir nadiifinta tiirarka nukliyeerka, saxanka godka qoto dheer, saxanka PCR, birta birlabta birlabta, iwm. Bandhigan, waxaan badanaa waxay dhiirrigelisaa laba qalab soo saarid nukliyeer ah, oo leh astaamo hawlgal fudud, gaadiid ku habboon, shaqo yar oo bannaan, iwm, iyo sidoo kale soo bandhigay tallaabooyin taxaddar ah oo taxane ah. Iyada oo loo marayo bandhiggan, ma aha oo kaliya in lagu muujiyo alaabtayada tayada sare leh, laakiin sidoo kale in kor loo qaado muuqaalka shirkadeena, naga caawi shirkadda CORBITION horumar muddo dheer ah. Shirkaddan bandhig si loo ballaariyo aragtida, maskaxda furan, barashada horumarsan, is-weydaarsiga iyo iskaashiga, si buuxda uga faa’iideysato bandhiggan, iyadoo ay ka qayb qaadanayaan macaamiisha iyo ganacsatada si ay u wada xiriiraan, ula xiriiraan, ula xaajoodaan, u sii horumariyaan muuqaalka iyo saamaynta shirkadda, laakiin sidoo kale inay sii Fahmaan sifooyinka alaabada ganacsi ee asaasiga ah, si loo wanaajiyo qaab dhismeedka wax soo saarkooda, loo ciyaaro faa'iidooyinkooda. Bandhiggan waxaan ku kasbaday wax badan, waxaan sii wadi doonnaa inaan si adag u shaqeyno, dad badanna ha u ogaadaan astaanteenna.
La dagaalanka cudurka faafa waa masuuliyada qof walba
agaasimaha Waaxda Sheybaarka ee Isbitaalka Kulliyadda Caafimaadka ee Peking Union, ayaa ku sheegay wareysi lala yeeshay dhammaadka sannadka 2020: “Gobollada qaarkood, qalabka wax lagu baaro ee PCR iyo soosaarayaasha nucleic acid-ka ayaa ku jira, xitaa sheybaarrada PCR ayaa la sameeyay. Si kastaba ha noqotee, furaha ayaa ah in la tababaro shaqaale farsamo oo ku takhasusay cilmiga bayoolojiga oo la tacaali kara aafada. ” Ma muhiim baa.